ကျွန်ုပ်တို့သုံးနိုင်သောကိရိယာများကိုသာတန်ဖိုးထားသည် Martech Zone
ကြာသပတေးနေ့, ဒီဇင်ဘာလ 23, 2010 စနေနေ့, အောက်တိုဘာလ 18, 2014 Douglas Karr
ယခုအပတ်သည်ကြမ်းတမ်းသောရက်သတ္တပတ်တစ်ခုဖြစ်သည်။ စိတ်ဖိစီးမှုများစွာသောအပြောင်းအလဲများနှင့်များစွာသောတိုးတက်မှုများစွာဖြစ်သည်။ အသက် ၄၂ နှစ်ရှိပြီ၊ ကျွန်ုပ်သည်လမ်းခရီးတွင်အဆင်သင့်ရှိနေပြီဖြစ်သော်လည်းယခုအပတ်တွင်ကျွန်ုပ်အလွန်ပြင်းထန်သောအဖြစ်အပျက်တစ်ခုကိုကြုံခဲ့ရသည်။
ငါဆိုရှယ်မီဒီယာဟာမယုံနိုင်လောက်အောင်အသံချဲ့စက်တစ်ခုလို့အကြာကြီးပြောခဲ့ဖူးတယ်။ ဒါပေမယ့်လူမှုရေးအရတက်ကြွစွာလုပ်ဆောင်နေကြတဲ့ကုမ္ပဏီတွေဟာတကယ့်ကုမ္ပဏီတွေပဲဆိုရှယ်မီဒီယာကနေအကျိုးအမြတ်ရရှိနိုင်တယ်။ လူမှုရေးမဟုတ်သော (သို့) လူမှုရေးဆန့်ကျင်သူများမဟုတ်သည့်ကုမ္ပဏီများသည်ဆိုရှယ်မီဒီယာတွင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကိုတစ်ခါမှမပြုလုပ်ဖူးပါ။ အဘယ်ကြောင့်သူတို့လိုကြသနည်း သူတို့ဟာလူမှုရေးဖြစ်ခြင်းမှတဆင့်စျေးကွက်ဝေစုဒါမှမဟုတ် ဦး ဆောင်မှုမရခဲ့ဘူး။ ရလဒ်အနေနဲ့ - အဖြစ် မီဒီယာအေဂျင်စီအသစ်ကျွန်ုပ်တို့သည်ကုမ္ပဏီအချို့ကိုဆိုရှယ်မီဒီယာထဲသို့တွန်းပို့သည်။ သို့သော်အခြားကုမ္ပဏီများသည်အခြားမြှင့်တင်ရေးနည်းဗျူဟာများကိုတွန်းအားပေးသည်။ ဆိုရှယ်မီဒီယာသည် မဟုတ် လူတိုင်းအတွက် (စိတ်မကောင်းဂုရု!) ။
လူတို့အတွက်လည်းအလားတူပင်။ ပြီးခဲ့သည့်ဆယ်စုနှစ်အတွင်းငါတန်ဖိုးဖြတ်ထားသောကုမ္ပဏီများ၊ လူများနှင့်အရင်းအမြစ်များကိုကျွန်ုပ်တီထွင်ခဲ့သည်။ ဒါကိုငါ့လို့ခေါ်မယ် ရတနာ။ ငါ့တည်ဆောက်ရေးမှာငါကြိုးစားအားထုတ်ခဲ့တယ် ရတနာ။ ကျွန်တော်မဝယ်ခဲ့ပါဘူး နှစ်နှင့်ချီ။ အဆက်မပြတ်ဖိအားပေးခြင်းခံရသည်။ ငါကျောထောက်နောက်ခံပြုသည့်အခါသူကသင်္ဂြိုဟ်လေ၏။ ငါကမှာကြိုးစားအလုပ်လုပ်ခဲ့သောအခါ, ငါတစ်ချိန်ကငါ့အဘဏ္anာကိုတစ်လက်မပြန်လည်။ ငါ့ဘဏ္treာကိုငါတည်ဆောက်နိုင်ဖို့ငါအချိန်နှင့်ကြိုးစားအားထုတ်မှုများနှင့်အတူငါမြတ်နိုးသည်။ အဲဒါအဖိုးမဖြတ်နိုင်ပါ ကျွန်ုပ်၏ကုမ္ပဏီသည်ကျွန်ုပ်၏ရတနာများကြောင့်မွေးဖွားလာသည်။
ငါ့ဘဏ္treာကိုငါမသိမ်း။ သင်၊ ဤအရာကိုဘလော့ဂ်၊ ကုမ္ပဏီ၊ ရုံး၊ ကိရိယာများ၊ စာအုပ်၊ ဖြစ်ရပ်များ၊ အက်ပလီကေးရှင်းများ၊ ရေဒီယိုအစီအစဉ်များဖြင့်သင်တွေ့ရလိမ့်မည်။ ငါသည်ငါ့ဘဏ္treာကိုကာကွယ်နေစဉ်, ဒါပေမယ့်ငါကဖုံးကွယ်ဘယ်တော့မှငါကိုယ့်ကိုကိုယ်မှစောင့်ရှောက်မယ်။ ငါဘာကြောင့်အလိုလို တခြားသူတွေလည်းငါ့ဘဏ္othersာကနေအကျိုးရစေချင်တယ်။
ဒါပေမယ့်တချို့တော့မဟုတ်ဘူး။ ငါသဘောပေါက်လာတာကငါ့ရဲ့ဘဏ္treာကိုငါတန်ဖိုးထားတယ်၊ ဘာကြောင့်လဲဆိုတာငါသိလို့ပဲငါတန်ဖိုးထားတယ် အဲဒါကိုသုံးပါ။ ငါဟာအလားအလာကောင်းတွေမြင်လာပြီးငါ့ဘဝကိုဘယ်လိုပြောင်းလဲစေခဲ့သလဲဆိုတာသိတယ်။ ၎င်းသည်ကျွန်ုပ်အတွက်အထောက်အကူပြုနိုင်ပြီးမည်သူ့ကိုမဆိုသြဇာသက်ရောက်နိုင်သည်ကိုကျွန်ုပ်သိသည် it စနစ်တကျ။ အကယ်၍ တစ်ယောက်ယောက်ကဒေါ်လာထောင်ပေါင်းများစွာတန်သောကိရိယာများဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့၏ကားဂိုဒေါင်ကိုပြလျှင်ကျွန်ုပ်သည်ခေါင်းကိုညိတ်။ လမ်းလျှောက်နေကောင်းဖြစ်လိမ့်မည်။ အကယ်၍ သူတို့သည်စက်ပြင်သမားဖြစ်ပါကထိုကိရိယာပုံးသည်သူတို့ကိုအလုပ်အကိုင်နှင့်တစ်သက်တာပံ့ပိုးပေးနိုင်ကြောင်းသူတို့နားလည်လိမ့်မည်။ ငါအဲဒါကိုမသုံးနိုင်ဘူး၊ ဒါကြောင့်ငါတန်ဖိုးမထားဘူး။
ငါ့ဘဏ္treာ၏တန်ဖိုးကိုတစ်စုံတစ်ယောက်ကအသိအမှတ်ပြုသောအခါ၊ ငါအချို့သော်လည်းရိုးရိုးမဟုတ်နိုင်ကြောင်းယခုအပတ်ထွက်တွေ့ရှိခဲ့! လူမှုရေးမီဒီယာနှင့်အွန်လိုင်းစျေးကွက်အကြောင်းကုမ္ပဏီများအားပြောသည့်အခါ၎င်းကိုစိတ်ထဲမှတ်ထားပါ။ ကုမ္ပဏီတွေသူတို့မရှိဘဲကြီးထွားလာခြင်းနှင့်သာယာဝပြောတဲ့လျှင်, သူတို့သည် မပေးနိုင် သူတို့ယူဆောင်လာနိုင်တဲ့တန်ဖိုးကိုသဘောပေါက်ပါ။ သူတို့ကိုသင်သက်သေပြဖို့လိုလိမ့်မယ်။ တဖန်သင်တို့နိုင်ခြင်းဖြစ်နိုင်သည်။
လူများနှင့်လည်းသတိရပါ။ အချို့ကသင်၏ကွန်ယက်နှင့်သင်၏လူမှုရေးအပြန်အလှန်အကျိုးသက်ရောက်မှုသည်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုမဟုတ်ဟုထင်ကြလိမ့်မည်၊ သင်ကသင်၏အချိန်ကိုဖြုန်းတီးနေသည်ဟုထင်လိမ့်မည်။ ဒါဟာသိသာအသံလိမ့်မည်, ဒါပေမယ့် we သာ tools တွေကိုတန်ဖိုးထား we သိ we သုံးနိုင်သည်
Tags: စျေးကွက်ရှာဖွေရေးအက်ပ်များစျေးကွက်ရှာဖွေရေးပလက်ဖောင်းစျေးကွက်ရှာဖွေရေး software ကိုဆော့ဖျဝဲtools တွေအဘိုး
26:2010 pm တွင်ဒီဇင်ဘာလ 6, 45 တွင်
28:2010 pm တွင်ဒီဇင်ဘာလ 9, 55 တွင်
တကယ်ကောင်းတဲ့ ပို့စ်ပါ Doug။ စဉ်းစားစရာ ကောင်းတာတွေ...